हेल्थ टिप्स : एपेन्डिसाइटिस भएको यसरी थाहा पाउन सकिन्छ | Ratopati
personअञ्जु तामाङ exploreकाठमाडौं access_timeभदौ २१, २०७६ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ –एपेन्डिसाइटिसको समयमा अपरेशन भएन भने बिरामीको मृत्युसम्म हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । साथै मुटु, मिर्गौलालगायतका रोगको समस्या भएका बिरामीको हकमा यो रोग निकै जटिल मानिन्छ ।
चिकित्सकहरुका अनुसार यस्तो बिरामीको अपरेशन गर्न मिल्दैन । यस्तो बिरामीलाई एपेन्डिसाइटिसको समस्या भएको अवस्थामा केही कुरामा ध्यान दिने हो भने पनि अन्य थप समस्याबाट पनि जोगिन सकिन्छ ।
मानव शरीरमा देखिने एपेन्डिसाइटिसको समस्या जसलाई पनि, जतिखेर पनि र जहाँ पनि हुन सक्ने समस्या हो । एपेन्डिसाइटिस हुनुको खास कारण अहिलेसम्म पनि पत्ता लगाउन सकिएको छैन । तर पनि एपेन्डिक्स भएको ठाउँमा जस्तैः दिसा गएर अड्कियो भने वा रगत संचार कम हुँदा एपेन्डिक्स सुन्निन थाल्छ । सुन्निएपछि एपेन्डिसाइटिसको समस्या आउने हो । यस्तै कुनै खानेकुरामा बियाँहरु पनि एपेन्डिक्समा गएर अड्कियो भने वा सोही ठाउँमा मासुहरु पलायो भने पनि एपेन्डिसाइटिस हुन सक्छ ।
अन्य केही रोगहरुलाई जसरी नै हेलचेक्र्याईँ गरेर पछि उपचार गरौँला भनेर बस्ने अवस्था एपेन्डिसाइटिस हुँदैन । यसलाई समयमानै उपचार गर्नुपर्छ । एपेन्डिसाइटिस भएपछि उपचारको समयसीमा हुन्छ । दुखाइ सुरु भएदेखि ७२ घण्टाभित्र अपरेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर समस्या देखापरेको जतिसक्दो छिटो चिकित्सकको सल्लाह अनुसार अप्रेशन गर्दा बिरामीको लागि राम्रो हुन्छ । जति ढिला भयो त्यती धेरै जटिलताहरु बढ्दै जान्छन् ।
एपेन्डिसाइटिसको समस्या हुने वित्तिकै यसको तुरुन्तै अपरेशन गरिनुपर्छ नत्र त्यो फुटेर मानिसको निधन पनि हुन सक्छ भन्ने गरिन्छ, वास्तवितकता के हो ?
समयमा उपचार भएन भने एपेन्डिसाइटिस फुटेर निधनसम्म हुन सक्ने कुरा सत्य हो । यो समयमानै अपरेशन गरिएन भने सेस्पसिसमा टन हुन सक्छ । पिप शरीरमा फैलिएर मल्टिअर्गान फेलियर हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ ।
नेपालमा अझैसम्म पनि सबै स्वास्थ्य सेवा नागरिकसमक्ष पुग्न सकेको छैन । यसलाई दूर्भाग्य मान्नुपर्छ । नेपालमा यति धेरै सर्जनहरु छन् र पनि सेवा नपुग्दा नमज्जा लाग्छ । सबै नेपाली नागरिकमा स्वास्थ्य समस्या देखिएको खण्डमा तत्काल काठमाडौँ आउन सक्ने र ठूला—ठूला सहर जान सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यो कारणले गर्दा स्वास्थ्य उपचारको भयावहको अवस्थानै छ भन्नु पर्छ ।
अस्पताल आउनेको पनि ठूलो समस्या रहेको छ । मैले वीर अस्पतालमा काम गरिरहदा एपेन्डिसाइटिस भएको ५ दिन पछि अस्पताल आइपुग्ने बिरामीहरु पनि छन् । लामो यात्रा र विभिन्न अस्पतालमा घुम्दा—घुम्दा बल्ल वीर अस्पताल आइपुग्नुहुन्छ । यस्ता केशहरुमा भने कतिपयमा हामी सफल हुन्छौ भने कतिपयमा असफल हुन्छौँ । एपेन्डिसाइटिस फुटेर, पिपहरु पेटभरी फैलिएको अवस्थामा पनि अस्पताल आउनु हुन्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा भने शतप्रतिशत उपचारमा सफल हुन्छ भन्ने छैन । म बिरामीलाई सकेसम्म छिटै अस्पताल पुग्नको लागि आग्रह गर्छु । एपेन्डिसले अन्तिम अवस्थासम्म पनि रोगसँग लड्ने प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ । त्यो अवस्था सम्म हामीले उपचार गर्न सक्यौ भने सफल हुन्छौ । रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता हराएपछि समस्या जटिल हुन्छ । फुटेर पिप सबै पेटभरी फैलिसकेको अवस्थामा भने बिरामीलाई गाह्रो हुन्छ । अन्य रोग नलागेको व्यक्तिलाई बचाउँन सकिन्छ । तर, मधुमेह, किड्नी, मुटुसम्बन्धी रोग लागेका र उमेर पनि धेरै भएका बिरामीलाई बचाउन गाह्रो हुन्छ ।
एपेन्डिसाइटिसको उपचार विधि अपरेशनमात्रै हो या अन्य पनि छन् ?
रगत पातलो भएको बिरामी, मुटुको समस्या भएका, कलेजो, किड्नीसम्बन्धीे बिरामीको हकमा अपरेशन गर्न मिल्दैन । त्यो अवस्थामा सुईबाट औषधि लगाएर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा भने त्यो पनि सफल हुँदैन । यस्तो अवस्थामा चाहिँ अपरेशन नै गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीलाई यस्तो अवस्थामा भने धेरै गाह्रो हुँदै आइरहेको छ । अपरेशन गर्दा पनि समस्या नगर्दा पनि समस्या हुने दुबै समस्याले गर्दा अन्य रोग लागेको बिरामीको हकमा गाह्रो हुने हो । अन्य समस्या नभएको एपेन्डिसाइटिसमात्रै भएको बिरामीको हकमा भने अपरेशन नै पहिलो उपचार हो ।